Okirikiri okporo ụzọ nke ìhè, anyanwụ na-enye ìhè na okporo ụzọ anyanwụ, okporo ụzọ na-emepụta ìhè na anyanwụ na-edozi
Nkọwa:Okirikiri okporo igwe,Mbara Igwe,Ala na-acha uhie uhie,Ala na-ekpo ọkụ n'anwụ,,
Okirikiri okporo igwe,Mbara Igwe,Ala na-acha uhie uhie,Ala na-ekpo ọkụ n'anwụ,,
Home > Ngwaahịa > Ìhè anyanwụ > Okirikiri okporo igwe
Ngwaahịa nke Okirikiri okporo igwe , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Okirikiri okporo igwe , Mbara Igwe suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ala na-acha uhie uhie R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
China Okirikiri okporo igwe Ngwa
Igwe ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ bụ usoro mmepe nke njem oge a. Site na nkwado zuru ụwa ọnụ nke ndụ obere-carbon, ìhè ọkụ ọkụ ga-abawanyewanye. Dịka ọkụ ọkụ na gburugburu ebe obibi-ọkụ ọkụ ọkụ na-azọpụta ọkụ ọkụ, ọkụ anyanwụ okporo ụzọ na -abụkarị benchmark na okporo ụzọ, na-enye onyinye na nchekwa okporo ụzọ.
Uhie okporo ụzọ anyanwụ na- adabere na ike anyanwụ iji hụ na iji ọkụ ọkụ eme ihe, ọ na-eji ike anyanwụ, zọpụta ọkụ eletrik na nchedo gburugburu ebe obibi, arụnyere n'enweghị mkpa maka ịdọba eriri. Ogwe ọkụ mgbaàmà nwere ọrụ nchekwa nchekwa, nke nwere ike ịkwado ọrụ nkịtị maka 10-30 ụbọchị. Ngwá ọrụ ike anyanwụ na-enwere onwe ya pụọ ​​na nrụgide nke akara ike ma nwee ike ịbịnye ya n'oge ọ bụla n'okporo ụzọ ebe anyanwụ nwere ike ịcha, nke kwesịrị ekwesị maka ọrụ niile. Uru kasịnụ nke ike anyanwụ bụ ọdịda ya na mgbanwe ya. Ojiji nke ike anyanwụ pv achọghị ike mpụga, mgbidi na nrụnye mgbatị dị mkpirikpi, nke dị mfe ibu, a pụkwara iji ya na ebe ọ bụla ị chọrọ ịdọ aka ná ntị na ncheta. Ọ nwere ike izute mkpa ndị uweojii na-eme njem na-emeso ikeike mberede, ike ike na ihe mberede ndị ọzọ.
Ala na-ekpo ọkụ n&#39;anwụ